အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: သူတို့....ခေတ်သစ်မိန်းမတွေ (ကိုယ်မပါ)
Posted by တီချမ်း at 2:59 PM
နန်းညီ June 1, 2011 at 4:10 PM
သိပ်သိသာတာပဲ.. ဒါရေးတော့ ကျတော့ အငေါ်တူးလေသံ သိပ်မပါဘူး.. ဖတ်ကတည်းက မိန်းမတွေဘက်က မြင်ပြီး သာပြီး ဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတဲ့ လေသံဖြစ်နေတာ..
တီချမ်း June 1, 2011 at 4:14 PM
ဟယ် ညည်းကတော့ အကောင်းကို မမြင်ပါ့လား ခုကတည်းက ကျားဘက်လိုက်ပြီး ကြိုက်ဘက်ပါနေတာ ဒုက္ခရောက်မှ သိတယ် ညည်းအေ
နန်းညီ June 1, 2011 at 4:19 PM
Rita June 1, 2011 at 4:20 PM
((ကိုယ်ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ မဖြစ်တော့ရော ဘာအရေးလဲ အရင်ကလဲ ကိုယ်တွေက ယောက်ျားတွေ ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ သုံးခဲ့တယ် ခုလဲ ဆက်သုံးတယ်ပေါ့။ စိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ))
ဖတ်ဖူးတဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းကို သတိရတယ်။ "မောင့်ပိုက်ဆံလည်း ခင့်ပိုက်ဆံပေါ့၊ ခင့်ပိုက်ဆံလည်း ခင့်ပိုက်ဆံပေါ့" ဆိုတာ...
တီချမ်း June 1, 2011 at 4:21 PM
တွေ့အောင် ရှာပြီး ရအောင်ပြောသေးတယ်နော် ဒေါ်ရီတာ ဟိဟိဟိ
အစက ရေးမယ့် စာစု ရှိသေးတယ် ရပ်လိုက်တာ တကယ် ရှင်ပြောလို့အဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားတယောက်တည်း ရဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်မဖြစ်က ဘာအရေးလဲ လို့ ထည့်မလို့ဟိဟိဟိ
Rita June 1, 2011 at 4:35 PM
အဲလို ရေးလိုက်ရင် ပြောလိုရင်းအကြောင်းအရာကြီးကလည်း ဂွမ်းသွားမှာပေါ့။ mislead တွေက ပေါပါဘိသနဲ့။
တီချမ်း June 1, 2011 at 4:45 PM
ဟုတ်ပါ့ ခက်တယ်နော် ခုတောင်...ဟိ သစ္စာဖောက်တွေက ရှိနေတာ
မိုးခါး June 1, 2011 at 4:57 PM
အပျိုကြီးဖြစ်သွားရင် တီတရားခံပဲ :D
တီချမ်း June 1, 2011 at 5:02 PM
ဟယ် အပျိုကြီး ဖြစ်တာ ရေးပြီးသွားပြီလေ ဒီမှာ
ကြိုက်ဧ။် ကြိုက်ဧ။် ...။
jr June 1, 2011 at 8:07 PM
'ဒီခေတ်မှာ ကျားကျား မမ ပြားပြား ကွဲကွဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး သို့မဟုတ် ကိုယ့်အတွက် ပဲ ကိုယ်ကြည့် ဆိုတဲ့ အတ္တ ဦးစားပေး ပဓာန ဝါဒ ခေတ်ဦး ကိုရောက်နေပါပြီ'.. အဲဒါ ဟုတ်တယ်။
တီ့အမေ အရိုးအရင်း အိုးလူးဆီလူးနဲ့ပဲ ပြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စကျတော့ မိခင်စိတ်ကိန်းအောင်းနေတဲ့ မေတ္တာတရား ထင်တယ်နော်။ မိန်းမတွေမှာက မွေးရာပါမိခင်စိတ်ရှိကြတာကိုး။ တချို့လူတွေက အဲတာကို တန်ဖိုးထားတတ်ပြီး တချို့ကျတော့ အဲဒီမေတ္တာတရားနဲ့ ခွင့်လွှတ်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူကြတယ်။ အဲဒီစိတ်တွေရော ပျောက်ကုန်ကြပြီလားတီ?
thump up! really nice post. t chan
တီချမ်း June 1, 2011 at 9:47 PM
လွမ်းသုရင် June 2, 2011 at 1:12 PM
Almost agree with you TChan. I like your opinion. :)
ချစ်ကြည်အေး June 2, 2011 at 3:51 PM
မိန်းမတွေအကြောင်းပြောမှတော့ ညည်းမပါလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲအေ...။ အများစုက မှန်နေတာတွေမို့ အားပေးပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ အရင်က မိန်းမ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေက ကျန်ခဲ့ပြီ။ နောက် ဆယ်စုနှစ် တခုပြောင်းရင် အခုဖွင့်ဆိုချက်တွေလည်း ပြောင်းဦးမှာပဲ။ သဘာဝကျပါတယ်...။ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဘာကိုမှ အတင်း ဆုတ်ကိုင်မထားသင့်ဘူးမို့လား.....
တီချမ်း June 2, 2011 at 4:17 PM
မဟုတ်ဘူး ဒေါ်ဒေါ်ချစ် အထင်တွေမှားနေပြီ
မီးက ဒီမှာ ပါတော့ဘူး မီးက ခြောက်သွားပီ အခု ဟိ
Oh....this encourages mealot...thanks!!!
Vista June 4, 2011 at 5:51 PM
း) တီပြောမှ ကျနော်တို့ မိသားစုမှာ ခေတ်မိန်းမတွေ ချည်းပါလား။ အဘွားရဲ့ အဘွားလက်ထက်ကတည်းက မှီခိုမိန်းမမရှိဘူးဗျ။ အလကားနေမယ့်အစား ပွဲရုံလောက်တော့ လုပ်သေးတယ်။ အသက်ကြီးလာတော့ ငွေတိုးပေးသေးတာ။ ဟားဟား။